Podcast (Fandraketam-peo) : Fampahafantarana Ny Tetikasa Nari Jibon · Global Voices teny Malagasy
Podcast (Fandraketam-peo) : Fampahafantarana Ny Tetikasa Nari Jibon
Voadika ny 29 Desambra 2017 8:27 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Jolay taona 2007 ny lahatsoratra teny Anglisy)
Vao telo herinandro lasa izay, nambara toy ny iray amin'ireo mpandray anjara dimy amin'ny fihodinana voalohany nahazo vatsy tamin'ny Rising Voices vatsy ny foibe Nari Jibon ao Dhaka. Ny vatsy, izay manome famatsiam-bola kely ho an'ireo vondron'olona sy olon-tsotra izay mampiely fampitam-baovaon'olon-tsotra amin'ny vondrom-piarahamonina tsy hita amin'ny aterineto, dia hanampy ny Nari Jibon mba hamiditra bilaogy amin'ny kilasy Bangla, Anglisy, sy ny solosaina..
Naorin'ilay Mpampianatra Sosiolojia Kathryn Ward tamin'ny taona 2005 tao Dhaka ny Nari Jibon. Manome fampianarana famakian-teny sy manoratra sy fiofanana arak'asa ho an'ny tanora vehivavy Bangladeshita ny tetikasa, mba ahafan'izy ireo mihary sy mahita asa eo amin'ny sehatra hafa ankoatra ny asa an-trano sy ny orinasa fanaovana akanjo. Efa mampiasa ny fitaovana media an'olo-tsotra sahady ireo tovovavy ao amin'ny Nari Jibon mba handraketana ny tontolo manodidina azy ireo. Nanomboka bilaogy roa izy ireo: amin'ny teny Anglisy, Bangladesh from our View sy amin'ny teny Bangla, Our Stories. Hahita lahatsoratra momba ny sinema Bangladeshita ianao, fanadihadiana momba ny fiainan'ny mpitondra posiposy, ary vao haingana indrindra, tantarana tovovavy saranga antonony izay lasa mpivaro-tena ankehitriny.
Afaka mamaly fanontaniana hafa aho: nahoana isika no tokony hiahy ny rehetra? Nahoana isika no mifandray amin'ny olona? Nahoana isika no manaraka ny fiainan'ireo olo-malaza sy ny mpiara-monina? Ary nahoana isika no tsy afaka misafidy mba handray ireo zatovovavy ao Dhaka ho mpiara-belona amintsika koa?
““Mankafy Fahalalahana Kokoa Ny Vehivavy, Atsinanana na Andrefana?” ” avy amin'i Ferdouse Oneza tao amin'ny bilaogy Adhunika
Trohy ny Podcast